पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न ९ वटा नीजि प्रयोगशालाले दिए निवेदन – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार ०१:२९ English
पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न ९ वटा नीजि प्रयोगशालाले दिए निवेदन
काठमाडौँ, ३० जेठ । पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न सक्ने भन्दै ९ वटा नीजि प्रयोगशालाहरूले निवेदन दिएका छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिहिबारसम्म इच्छुक निजी प्रयोगशालालाई निवेदन दिन भनेकोमा २० वटा निवेदन परेपनि ९ वटासँग मात्रै जनशक्ति र मेशिन पाईएको हो ।
प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रूना झाका अनुसार दैनिक ३ सय जनाको पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्नसक्ने भन्दै बिहिबारसम्म ९ वटा निजी प्रयोगशालाहरूले निवेदन दिएको र यीमध्ये ३ वटा ग्रेड ए र बाँकी ग्रेड बी का रहेका छन् ।
अब निवेदन दिएका ९ वटा नीजि प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिन प्रयोगशालाले निर्देशिका तयार पार्ने र उक्त निर्देशिका मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि उनीहरुले परीक्षण सुरू गर्न सक्ने छन् । निर्देशिकामा नै पीसीआर परीक्षणको शुल्क र अन्य मापदण्ड तय गरिने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ ।
तर स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा कारबाही निर्देशिका अनुसार ग्रेड ए मा सूचीकृत नीजि प्रयोगशालाले मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
३० जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १३:३८ मा प्रकाशित